अमेरिकाको ४५औं राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रम्प :: a1nepal.com.np
अमेरिकाको ४५औं राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रम्प
को हुन् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ?
अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीको सहयोगमा
अमेरिकाको ४५ औ राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएका छन् । निर्वाचन अघि सार्वजनिक भएका सर्वेक्षण विपरित ३० वर्षदेखि अमेरिकाको राजनीतिमा सक्रिय पूर्वविदेशमन्त्री तथा भुतपूर्व राष्ट्रिपति विल क्लिन्टनकी पत्नी डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हिलारी क्न्टिनलाई पछि पार्दै डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएका हुन ।
निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले मतगणनामा २ सय ७४ इलेक्टोरल मत ल्याई विजय भएका हुन् । ईलेक्ट्रोल कलेजमा ५ सय ३८ जना सदस्यमध्ये राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनको लागि २ सय ७० मत आवश्यक पर्छ ।
यसै विच राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरीकसम्वोधन गर्दै अब सम्पूर्ण अमेरिकी जनता एकजुट हुने बेला आएको बताएका छन् । राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए लगत्तै पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भने, यो विजय ऐतिहासिक तथा सम्पूर्ण अमेरिकी जनताको जित हो।’
आफूलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विजयी बनाउन परिवारको निकै ठूलो हात रहेको भन्दै ट्रम्पले भने, उहाँहरु सबैले निकै मेहनत गर्नु भएको छ। उनले सबै अमेरिकी मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्दै भने, निर्वाचनको अवधिमा मलाई समर्थन गर्ने नगर्ने तथा मत दिने नदिने सबै प्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छु।’
उनले अब डेमोक्रेट र रिपब्लिकन सबै मिलेर अमेरिकालाई थप समृद्ध र सुरक्षित बनाउन लाग्नुपर्ने बताए।
पूर्वाधार निर्माण अभियानलाई तीव्र पार्ने बताउँदै उनले भने, “हामीसँग विशाल आर्थिक योजना छ, अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई विश्वकै सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र बनाउने छौं, । हामी वृद्धिलाई दोब्बर बनाउने छौं।”
उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता अमेरिकीहरुको हित र हकका लागि हुने बताए । विशेष सम्बोधनको अन्त्यमा ट्रम्पले भने -‘आई लभ दीस कन्ट्री।’
को हुन डोनाल्ड ट्रम्प ?
अमेरिकी अर्बपति व्यापारी नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्म सन् १९४६ जुन १४ मा भएको हो । ट्रम्प अमेरिकाका नामी अर्बपति हुन् । ट्रम्प न्युयोर्कको म्यानह्याटनमा विशाल भवन निर्माण परियोजनामा सक्रिय थिए ।
रियालिटी टिभी शोबाट चर्चामा आएका ट्रम्पले २०१५ मा राष्ट्रपति पदका लागि रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । विभिन्न निर्वाचनमा चर्को प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका ट्रम्प जुलाई १९ मा रिपब्लिकन पार्टीको आधिकारीक उम्मेदवार बनेका थिए । विवादास्पद भनाइ र विभिन्न सेक्स स्केन्डलका कारण आलोचनाको पात्र बनेका ट्रम्प राष्ट्रपति बन्ने कल्पना थोरैले मात्र गरेका थिए ।
ट्रम्प अमेरिकाको नाममा बोर्ड गेम भएका पहिलो राष्ट्रपति हुन् । उनको व्यापारमा मनोपली छ । ट्रम्पले सन् २००६ मा पहिलो पटक आफ्नै भोड्का बजारमा ल्याएका थिए । सन्काह स्वभावका ट्रम्पले २०११ मा भोड्काको व्यापार बन्द गरे ।फोर्स म्यागजिनका अनुसार अमेरिकाको सर्वाधिक धनीको सूचीमा ट्रम्प १५६ औ स्थानमा छन् भने संसारकै धनी मध्ये ट्रम्प ३२४ औँ व्यक्ति हुन् । फोर्सले यसै वर्ष सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ट्रम्पको नेटवर्थ करिब ३.७ अर्ब डलर रहेको छ ।
ट्रम्पले महिलामाथि गरेको अभद्र टिप्पणी गरेको टेप अमेरिकी सञ्चार माध्यमले निर्वाचन नजिकिदै गर्दा शृङ्खलाबद्ध रुपमा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।
विभिन्न महिलाहरुले निर्वाचन अगाडि मात्र ट्रम्पले यौन दुव्यवहार गरेका स्क्यान्डल समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
ट्रम्प सार्वजनिक जीवनमा जति विवादित छन् व्यक्तिगत जीवनसमेत उनको अस्तव्यस्त छ । उनले अहिलेसम्म तीनवटा विवाह गरेका छन् । उनले सन् १९७७ मा फेशन डिजाइनर इभाना विन्कलमायरसँग विवाह गरे । उनकी पहिलो श्रीमतीका तीन सन्तान छन् । डोन, इभान्कार र एरिका उनकी पहिलो श्रीमतीका सन्तान हुन् ।
व्यक्तिगत जीवनमा धेरै ठक्कर खाएका ट्रम्पले सन् २००५ मा मोडेल मेलानिया क्लाउससँग तेस्रो विाह गरे । ट्रम्पले तेस्रो विवाह गरेकी क्लाउस २० वर्ष कान्छी छिन् । ट्रम्पको तेस्रो विवाह समारोहमा अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गरेकी डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन र अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन समेत सहभागी थिए ।
ट्रम्पले ५० औँ वर्षमा गरेको तेस्रो विवाहपछि भने पारिवारिक जीवनमा कुनै ठक्कर खाएका छैनन् । ट्रम्पकी तेस्री श्रीमती अर्थात् मोडल क्लाउसबाट ब्यारोनल विलियम ट्रम्पको जन्म भएको छ । ट्रम्पको ठूलो परिवार छ । उनले परिवारका सबै सदस्यलाई आफ्नो व्यापारसँग संलग्न गराएका छन् ।
अमेरिकाको ४५ औँ राष्ट्रपति बनेर ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्दै गर्दा ट्रम्पले कसकसलाई भित्र्याउने छन् भन्ने अनुत्तरित प्रश्न छ । ट्रम्प अमेरिकाको ४५ औँ राष्ट्रपति बन्दै गर्दा उनको जितलाई धेरैले आश्चर्य मानेका छन् ।
उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनका दाजुको हत्यामा संलग्न महिला निर्दोष भएको दाबी इजरायलमा राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ इजरायलको स्थापना नागरिक समाज इजरायलद्ववारा गौतम हत्याको निन्दा, मातृभुमीको लागि पर्वत सेवा समाजको भारतमा पनि शाखा बिस्तार महाराज श्री चैतन्य कृष्णजीको आध्यात्मिक प्रबचनसँगै इजरायलमा स्वस्थानी सांग्य गरियो हिन्दु जागरण इजरायल शाखाको नयाँ कार्य समिति चयन भारतद्वारा पाकिस्तानको सीमाक्षेत्रमा गोलाबारी, दुई सैनिक मारिए, नौजना घाइते प्रवासी नेपाली नागरिक समाज इजरायलको नयाँ कार्यसमिति चयन डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीबाट आधिकारिक उम्मेदवार घोषित मगर संघ इजरायलले आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनायो
← वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको नजरमा नेपाली नेताको दिमाग कस्तो- ISSUE OF THE DAY	सिन्धुलीगढीमा धुमधाम विजयोत्सव →